Madaxweyne Maxamed C/laahi (Farmaajo) iyo wefdi uu hogaaminayo oo safar shaqo ku maraya qaar ka mid ah wadamada ay ciidamadu ka joogaan dalka Soomaaliaya ayaa maanta Magaalada Jabuuti waxa uu kulan kula yeeshay Madaxweynaha dalkaasi Jabuuti, mudane Ismaaciil Cumar Geelle.
Labada Madaxweyne ayaa ka wada hadlay sida labada dal Jabuuti iyo Soomaaliya ay isaga kaashan lahaayeen dhanka amniga, iyagoona isla qaatay in la dardargeliyo hawlgalo lagu dabargoynayo Ururka Al Shabaab.
Madaxweyne Farmaajo ayaa uga mahadceliyay Madaxweyne Geelle kaalinta uu ka gaysanayo nabadeynta iyo dib u soo kabashada dalka Soomaaliya, wuxuuna tilmaamay in shacabka Soomaaliyeed ay abaal weyn uga hayaan dowladda iyo shacabka Jabuuti, sida ay mar walba u garab taaganyihiin.
Madaxweynaha waxa uu si gaar ah u xusay gurmadkii caafimaadka degdega ahaa, ee Jabuuti u fidisay dadkii ku dhaawacmay qaraxii Isgoyska 14-ka October (Ex Zoobe).
Madaxweynaha Jabuuti ayaa sheegay in dalkiisu uu garab ku siinaayo dalka Somaaliya tallaabo kasta oo u horseedaysa xasillooni waarta iyo amni buuxa.
October 25, 2017 Geesey